Ku rakibidda LibreOffice 3.6.4 on Debian Wheezy (Imtixaanka hadda jira) | Laga soo bilaabo Linux
Ku rakibidda LibreOffice 3.6.4 Debian Wheezy (Imtixaanka hadda jira)
Mar aan fogayn ayaa 3.6.4 version de LibreOffice iyo xaddiga wararka uu qaybtani ka kooban yahay darteed, waxaan go'aansaday inaan ku dhejiyo my debian hiinraag Hagaag, maadaama ay kujirto marxaladda qaboojinta, waxaan u arkaa inay aad noogu adag tahay inaan si dhaqso leh ugu keydinno goobaha wax lagu keydiyo.
Kahor intaadan guda gelin faahfaahinta sida loo rakibo LibreOffice 3.6.4, waxaan dib u eegeynaa qaar ka mid ah wararka / hagaajinta taas Xafiiska Suite:
Taageerada miisaanka midabka iyo baararka xogta.
Ka soo dejiso .xlsx oo ka soo dejiso / ka dhoofiso / ilaa .ods gudaha ODF 1.2 (waa la dheereeyay).
Kaarka ereyga ee barta xaaladda.
10 bogag cusub oo casri ah
Dhoofinta PDF oo leh xulasho Watermark.
Soo rar shaandhada dukumiintiyada Corel Draw.
Taageero loogu talagalay soo dejinta Xafiiska SmartArt
Kuwa kale oo badan oo aan ka arki karno iskuxiraha aan horey u dhigay.
Haddii aan wax ka ogaaday noocyadan, waa in bootku aad uga dhakhso badan yahay noocyadii hore markaan furaynay LibreOffice markii labaad. Hagaag, aan u gudubno qaybta rakibidda.
Ku rakib LibreOffice 3.6.4
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo ayaa si macquul ah u gala bogga soo dejinta ee LibreOffice waana inaan helnaa wax sidan oo kale ah:
Sida aad ku arki karto sawirka, marka la fiiriyo feylasha u soo baxa soo dejinta waxaa ku jira labalaab .pm, oo sida kiiskan ah ayaan ku dhejin doonnaa gudaha Debian, si fiican waa inaan gujino xiriiriyaha oranaya Beddel Nidaamka, Nooca ama Luqadda.
Markaan gujino, waxaan helnaa bogga soo socda, halkaas oo aan ku dooran doonno nooca aan dooneyno inaan soo dejino.
Goor dambe ayaan doorannaa luqadda aan rabno inaan ku soo dejino LibreOffice.
Kadibna waxaan doorannaa qaab dhismeedka aan dooneyno inaan ku rakibno hadba qalabkayaga. Haddii aan taageero u helno 64 Bits waxaan doorannaa x86_64, haddii kale, x86.
Iyo voila, xiriiriyeyaasha faylasha ay kujiraan binaries ee .deb waa inay soo baxaan.
Mar alla markii aan soo degsanno feylasha waa inaan kala baxnaa. Waxa aan sameeyo waa kuwan soo socda, markii aan dhammaantood furiyo, waan nuquliyaa dhammaantood .deb in aan ka helno fayl-hoosaadyada kala duwan oo ku jira hal fayl.
Maaddaama ay macquul tahay, waa in aan tirtirno nooc kasta oo ka mid ah LibreOffice, maxaa yeelay inkasta oo uusan jirin wax khilaaf ah oo u dhexeeya, waxay noqon lahayd tan ugu caafimaad badan kiiskan. Tan awgeed waa inaan dhignaa $ sudo aptitude purge libreoffice libreoffice-common
Markaa waxaan ka helayaa galkaas galka boostada oo waa inaan dhigaa:
Waan sugeynaa oo tagnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ku rakibidda LibreOffice 3.6.4 Debian Wheezy (Imtixaanka hadda jira)
Elav, marwalba waan layaabay sida aad shaashadda ugala soo baxdo shaashadda oo dhan laakiin inaad mudnaanta siiso nal dheeraad ah meel cayiman: /
That Waxaan taas ku sameeyaa Gimp. Aan arko haddii aan sameeyo cashar yar oo ku saabsan sida tan loo sameeyo aniga oo aan dhib ku noqon jiritaankayga hahaha. Waa wax aad u fudud in la sameeyo.
Wanaagsan, waxaan rajeynayaa sidaas.
Way soo socotaa 😉
Fudud, waxaad abuureysaa lakab cusub, xulo gobolka aad rabto inaad muujiso, sii ctrl + i si aad u rogto oo aad ugu buuxiso xulashada lakabka cusub midab madow oo hoos u dhig hufnaanta illaa aad ka gaarto isbarbardhiga la doonayo.
Yup, hab kale oo aad u sameyso sidoo kale 😀 Waad ku mahadsantahay wadaagida caarada.
Waxaan u maleynayaa inuu xirahu leeyahay xulashadaas.
Waxaan ku sameeyay nidaamkan nooca 3.6.0, waxa xun ayaa ah in markay libreoffice-ku muujiyaan inuu jiro cusbooneysiin, waa inaan ku celcelinno nidaamka
Dejinta LibreOffice, ku dheji isla muuqaalka KDE, rakibo xirmada isku dhafka kde-loobasis, ma i caawin kartaa?
Jawaab Rodrigo Macedo
Muuji aagga sawirka adoo adeegsanaya Gimp
Khibradeyda aan u leeyahay router-keyga iyo shabakadeyda Wi-Fi